Zvakasiyana, naEloy Moreno
Kunyatsogadzirisa mukuverenga, parizvino kumwe kuenderana kunoenderana kunowanikwa pakati paEloy Moreno na Albert Espinosa. Nekuti vese vanoteedza zvinyorwa zvavo nechitambi ichocho chechokwadi chakatenderedza matambiro ekurarama uye nenziyo dzavo dzekupedzisira dzisingafungidzirwe dzinonyanya kunakidza. Chingave chinhu chakadaro, apo ...
Chirikadzi, naJosé Saramago
Vanyori vakuru vakaita saSaramago ndivo vanochengeta mabasa avo aripo nguva dzese. Nekuti kana riine basa rine vanhu rakadonhedzwa kuita zvinyorwa alchemy, iyo sublimation yehupenyu inowanikwa. Musoro wekudarika kweruzivo rwekunyora kana nhoroondo unosvika pakukosha kwechokwadi ...